Tsy kely lalana tokoa ny ratsy ary mampametra-panontaniana hoe mpanao gazety tokoa ve sa tsia no nahavita naka finday
ana mpanao gazety hafa ary tsy namerina izany tamin’ny tompony intsony omaly nandritry ny tafa natao tamin’ny mpanao gazety iray tetsy Bel Air ? Araka ny nambaran’ny lasibatr’ity tranga ity moa dia mpanao gazety vitsivitsy izy ireo no teny an-toerana ary miantso ilay naka ny fananany ny tenany mba hamerina izany amin’ny tompony mialoha ny tsy hitaran’ny raharaha.
Fanohanana ny Barea
Tsy ny Malagasy irery intsony ankehitriny no manohana ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra any amin’ny CAN fa hatramin’ireo teratany vahiny ihany koa. Nisy ampahany amin’izy ireny moa no maneho ny sarin’izy ireo miaraka amin’ny fihetsika sy fanamiana entina hanambarana izay fanohanana izay.
Resaka Barea hatrany dia ilay vodilaharan’ny Barean’i Madagasikara, Thomas Fontaine, izany sisa no hany mpilalaon’ilay klioba divizionina voalohany frantsay, Stade de Reims, mandray anjara amin’izao dingana famaranana ny CAN izao. Antenaina fa hitondra fivoarana amin’ny traikefany amin’ny tontolon’ny baolina kitra izany.